Fotoana famakiana: 3 minitra Indraindray ny teny hoe fanakorontanana dia misy dikany ratsy. Tsy mino aho fa ny varotra niomerika ankehitriny dia voasakantsakan'ny teknolojia maoderina, mino aho fa nampitomboiny. Ireo mpivarotra izay mampifanaraka sy mandray ireo haitao vaovao dia afaka manavakavaka, mandray anjara ary mifandray amin'ny vinavinany sy ny mpanjifany amin'ny fomba misy heviny kokoa. Ny andro andiany sy ny fipoahana dia miova ao aoriantsika satria lasa lasa tsara kendrena ny rafitra ary maminavina ny fihetsiky ny mpanjifa sy ny orinasa.
Asabotsy, Aprily 7, 2018 Talata, Janoary 22, 2019 Douglas Karr
Fotoana famakiana: 4 minitra Herinandro na lasa izay dia nangatahana aho mba hiteny amin'ny hetsika isam-paritra amin'ny Internet of Things. Amin'ny maha mpiara-miasa ny podcast Dell Luminaries ahy dia efa niatrika fampandrenesana an-tsarimihetsika Edge sy ny fanavaozana teknolojia efa manomboka. Na izany aza, raha mikaroka ny fahafaha-mividy marketing momba ny IoT ianao dia tsy misy resaka be dia be eto amin'ny Internet. Raha ny marina dia diso fanantenana aho satria hanova ny fifandraisana misy eo amin'i IoT
Talata, Febroary 27, 2018 Talata, Febroary 27, 2018 Douglas Karr
Fotoana famakiana: 2 minitra Ny isan'ny fitaovana mifandray amin'ny Internet ao an-tranoko sy ao amin'ny biraoko dia mitombo hatrany isam-bolana. Ireo entana rehetra ananantsika amin'izao fotoana izao dia manana tanjona miharihary - toy ny fanaraha-maso maivana, ny baikon'ny feo ary ny termostat azo volavolaina. Na izany aza, ny fitohizan'ny teknolojia sy ny fifandraisan'izy ireo dia miteraka fikorontanana eo amin'ny orinasa izay tsy mbola hitantsika teo aloha. Vao tsy ela akory izay, nandefasana kopian'ny Internet of Things: Digitize na Die: hanova ny orinasanao aho. manaiky
Fotoana famakiana: 2 minitra Vao haingana izahay no nizara ohatra vitsivitsy momba ny mety ho fiantraikan'ny Enterprise IoT (Internet of Things) amin'ny fivarotana fivarotana antsinjarany. Nizara tantara vaovao tamiko ny zanako lahy tamin'ny antsinjarany izay nanondro antontan'isa somary manjombona momba ny fanokafana sy ny fanidiana ny fivarotana antsinjarany. Na dia mitombo aza ny elanelan'ny fanidiana, zava-dehibe ny manaiky fa ity firenena ity dia manohy manokatra fivarotana antsinjarany bebe kokoa hatrany. Na i Amazon aza, ilay antsoina hoe mpivarotra antsinjarany
Alakamisy 16, 2017 Alahady, Novambra 19, 2017 Douglas Karr
Fotoana famakiana: 2 minitra Mihemotra ny famatsiana ara-bola ny indostrian'ny mpivarotra. Bloomberg aza dia maminavina fa mety ho tonga haingana amintsika ny Apocolypse Retail. Ny indostrian'ny varotra dia mosarena amin'ny fanavaozana, ary ny Internet of Things dia mety hanome ny filàna ilaina fotsiny. Raha ny marina, 72% ny mpivarotra am-barotra no miasa ao amin'ny tetikasa Enterprise Internet of Things (EIoT) amin'izao fotoana izao. Ny antsasaky ny mpivarotra rehetra dia efa mampiditra haitao akaiky amin'ny marketing. Inona ny EIoT? Amin'ny orinasa ankehitriny, fitomboana